Daa Na Me Werɛ Aho​—Menyɛ Dɛn? | Mmabun Bisa Sɛ
KENKAN WƆ Abkhaz Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Moore Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Tswana Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Zulu
“Sɛ obiara hia mmoa a, ɔba me nkyɛn ma meboa no. Nanso nea obiara nnim ne sɛ, sɛ meboa wɔn wie a, mekɔ fie kɔhyɛ dan mu sũ.”​—Kellie.
“Sɛ meboto a, ɛyɛ a mempɛ sɛ mɛbɛn obiara. Sɛ obi ka sɛ memmra dwumadie bi ase a, mepɛ biribi de yi me ho ano sɛnea ɛbɛyɛ a merenkɔ. M’abusuafoɔ nnim m’awerɛhoɔ no ho hwee. Ɛyɛ wɔn sɛ biribiara da dinn.”​—Rick.
Wo nso, ɛyɛ a wote nka te sɛ Kellie ne Rick anaa? Sɛ saa na wote nka a, ɛno nkyerɛ sɛ asɛm wɔ wo ho. Ɛwom ara a, yɛn mu biara werɛ tumi ho ne ho. Mmarima ne mmaa anokwafoɔ a Bible ka wɔn ho asɛm no mpo, ɛtɔ mmere bi a, na wɔn werɛ ho.​—1 Samuel 1:​6-8; Dwom 35:14.
Ɛtɔ da a na wonim nea enti a wo werɛ aho, nanso, ebi hɔ a na wonhu nea enti. Asɛm a Anna, ababaa bi a wadi mfie 19 kaeɛ ne sɛ: “Sɛ biribi bɔne bi ntoo wo mpo a, wo werɛ tumi ho. Sɛ wonni haw mpo a, wo werɛ tumi ho wo ho. Wodwene ho ara a, wonte aseɛ, nanso ɛtumi si!”
Sɛ wonim nea enti a wo werɛ aho o, wonnim o, asɛm no ne sɛ, ɛba saa a, ɛdeɛn na wobɛyɛ? Nneɛma a wobɛtumi ayɛ no bi nie:
Ka ho asɛm. Hiob ahohia mu no, ɔkaa sɛ: “Mɛkasa me kra awerɛhoɔ mu!”​—Hiob 10:1.
Kellie ka sɛ: Sɛ meka m’asɛm kyerɛ obi a, me ho bae me ankasa. Mete nka sɛ m’adesoa no, obi asɔ mu bi. Ɛte sɛ nea meda amena mu na obi de ahoma rebɛyi me afi mu.
Twerɛ wo haw no to hɔ. Sɛ awerɛhoɔ ama woayɛ basaa a, ɛnneɛ twerɛ sɛnea wote nka gu krataa so. Bere a Onyankopɔn honhom kaa Dawid ma ɔtwerɛɛ nnwom no, Dawid de n’awerɛhoɔ a ɔdi ho nsɛm kaa ho. (Dwom 6:6) Wo nso, sɛ wo werɛ ho na wotwerɛ ho asɛm to hɔ a, ɛbɛboa wo ma ‘woakora nyansa ne adwempa.’​—Mmebusɛm 3:​21.
Heather ka sɛ: Sɛ me werɛ ho a, m’adwene tu fra. Nanso, sɛ metwerɛ nea ahyɛ me so no to hɔ a, ɛma m’adwene mu da hɔ. Sɛ wotumi twerɛ nea ɛha wo to hɔ na wohu nea wobɛyɛ wɔ ho a, awerɛhoɔ renhyɛ wo so mmoro so.
Bɔ ho mpaeɛ. Bible ka sɛ, sɛ wobɔ wo haw ho mpae a, ‘Onyankopɔn asomdwoeɛ a ɛboro adwene nyinaa soɔ no bɛbɔ w’akoma ne w’adwene nsusuiɛ ho ban.’​—Filipifoɔ 4:​6, 7.
Esther ka sɛ: Meyɛe ara sɛ mɛhu nea enti a m’ani nnye, nanso manhu. Mesrɛɛ Yehowa sɛ ɔmmoa me mma mennya anigye. Afei deɛ na awerɛhoɔdie basabasa no afono me. Nanso Yehowa adom, me werɛ nho saa bio. Mahu sɛ mpaebɔ yɛ adwuma paa!
Awerɛhoɔdie te sɛ amena. Sɛ wobɔ wo ho mmɔden na woma afoforɔ boa wo a, wobɛtumi apue afi saa amena no mu
Nea wobɛtumi ayɛ: Kenkan asɛm a ɛwɔ Dwom 139:23, 24 no, na wobɛhu sɛnea ɛsɛ sɛ wobɔ Yehowa mpaeɛ. Ka biribiara a ɛwɔ wo koma mu kyerɛ no, na srɛ no sɛ ɔmma wonhu nea ɛma wodi awerɛhoɔ no.
Nea yɛaka yi nyinaa akyi no, Onyankopɔn Asɛm Bible nso wɔ hɔ ma wo. Bible yɛ nwoma a ɛsom bo paa. Sɛ wokenkan a, wobɛhu nneɛma pii a ɛbɛma w’ani agye.​—Dwom 1:​1-3.
Sɛ awerɛhoɔ no annyae a, ɛdeɛn na wobɛyɛ?
Aberanteɛ bi a wɔfrɛ no Ryan ka sɛ ɛtɔ da a ɔmpɛ sɛ ɔbɛsɔre afi kɛtɛ so mpo efisɛ ɔresɔre yi, awerɛhoɔ nkoaa. Ryan yare adwenemhaw. Nnipa pii nso wɔ saa yareɛ no bi. Nhwehwɛmu kyerɛ sɛ, sɛ woyi mmabun 4 a, wɔn mu 1 nya adwenemhaw a ano yɛ den anaa nea ano nyɛ den ansa na wabɛyɛ ɔpanin.
Dɛn na ɛbɛma woahu sɛ woanya adwenemhaw? Ebia na w’ani nnye sɛ kane no, anaa wo suban asesa. Ɛbɛtumi aba sɛ wompɛ sɛ wobɛbɛn obiara, na nneɛma a na woyɛ no bere bi a atwam nso, afei deɛ w’ani nnye ho bio. Afei nso, w’adidie ne wo nna nyinaa bɛtumi asesa, na ɛbɛtumi aba sɛ daa wote nka sɛ mfasoɔ nni wo so anaa woayɛ bɔne bi. Sɛ wohu saa nneɛma yi bi wɔ wo ho a, ɛbɛtumi akyerɛ sɛ woanya adwenemhaw.
Nokwasɛm ne sɛ, ɛwom ara a, nneɛma a yɛaka yi bi tumi yɛ yɛn mu biara. Nanso sɛ ɛboro nnawɔtwe mmienu a, ɛnneɛ ebia ɛho bɛhia sɛ woka kyerɛ w’awofoɔ ma wɔne wo kɔ ayaresabea. Sɛ yareɛ bi na ɛma wo werɛ ho saa a, ɛnneɛ mokɔ dɔkota hɔ a, mobɛhu.
Sɛ dɔkota ka sɛ woanya adwenemhaw a, ɛnsɛ sɛ wofɛre ho. Nnipa pii a wɔwɔ adwenemhaw no, esiane sɛ ayaresafoɔ hwɛɛ wɔn maa wɔn nnuro nti, wɔn ho atɔ wɔn, na seesei deɛ wɔn ani gye. Sɛ adwenemhaw na ɛma wo werɛ ho o, sɛ ɛnyɛ ɛno o, kae awerɛkyekyesɛm a ɛwɔ Dwom 34:18 no. Ɛhɔ ka sɛ: “Yehowa bɛn wɔn a wɔn akoma abubuo; ɔgye wɔn a wɔn honhom abotoɔ.”
Share Share Daa Na Me Werɛ Aho​—Menyɛ Dɛn?